Cumar Filish oo noqday alaad u edeegta Farmaajo & eedna u soo jiiday reer Muqdisho - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaCumar Filish oo noqday alaad u edeegta Farmaajo & eedna u soo...
Cumar Filish oo noqday alaad u edeegta Farmaajo & eedna u soo jiiday reer Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa noqday mid uu adeegsa laguna fuliyo qorshooyinka qariban oo ay wataan Farmaajo iyo Fahad Yaasin.
Isaga oo fulinaya awaamiirta Farmaajo ayaa mar uu xalay ka hadlay bur-burka ku yimid shirka ku eedeeyay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland in ay wadaa rakaato Siyaasadeed, islamarkaaana ay doonayaan in ay umad dhan ka daadsadaan xaqii ay lahayeen,sida uu hadalka u dhigay.
Cumar Filish oo horay u gabay mas’uuliyadii loo doortayayaa sheegayin dowladda Farmaajolooga fadhiyo in qabato doorashadii, islamarkana ay ballan qaadday, hase’ahate uu sheegay in dad kale ay diidanyihiin in la qabto doorashadii. Hadalkaa ayaa ah mid daqiiqda ka fog.
Sababta ay arrintaas u sameynayaan ayuu ku sheegay in ay wataan Qodobo,islamarkaana ay doonayaan in loo fuliyo,haddii kalana ay leeyihiin doorasho dalka kama dhaceyso. Beenta uu ka sheegay xaalada shirka ay noqon doonta mid uu ka shalaayo Cumar Filish